« Voambolana Tranainy Hovelomina » : nandresy tamin’ny fifaninanana i Hobiana Praised | NewsMada
« Voambolana Tranainy Hovelomina » : nandresy tamin’ny fifaninanana i Hobiana Praised
Andro iraisam-pirenena ho an’ny Tenin-drazana na ny Tenindreny, ny 21 febroary. Tontosa tamin’izany ihany koa ny famoahana ny vokatra tamin’ilay fifaninanana « Voambolana Tranainy Hovelomina », izay nokarakarain’ny Havatsa Upem sampana Frantsa.
Azon-dRazanajatovo Andrianimerina Hobiana na “Hobiana Praised” ny loka voalohany tamin’ilay fifaninanana “Voambolana Tranainy Hovelomina” izay nokarakarain’ny Havatsa Upem sampana Frantsa. Hahazo ny Rakiboky Elektronika (“Liseuse électronique”) sy ny boky kely Voambolana Tranainy Hovelomina 2021 hatontan’ny Havatsa-Upem Sampana Frantsa, izay hivoaka tsy ho ela ny tenany. Nanaraka azy tao i Ndrenja Andrianjohary Rakotojaona. Nahatratra 257 ny voambolana voangona tamin’ity fifaninana ity. Amin’ny maha mpanoratra an’i Hobiana, nanampy azy ny fivezivezena an-drenivohitra sy ambanivohitra, hita izany ao anatin’ilay boky nosoratany “Rom-padinkena”, izay ahitana karazana voambolana tsy dia fampiasa firy.
Ny fizoran’ny lalao
Isaky ny faran’ny herinandro dia niseho tsidimidimy manaraka ny literan’ny abidia ny teny voangona, ka asabotsy sy alahady ny anamarihan’ny mpilalao eo amin’ny sary fanentanana misy ny litera ny lahatsoratra noforoniny. ABDEF ny 12 sy 13 Desambra 2020, GHIJK ny 19 sy 20 Desambra 2020, LMNOP ny 09 sy 10 Janoary 2021 ary RSTVZ ny 16 sy 17 Janoary 2021.
Manome fehezanteny iray na tononkalo fohy (an-dalana efatra farafahabetsany) ianao misy ireo teny manaraka ny abidia ireo. “Azo atao ny mampiasa voambolana maromaro miaraka anaty lahatsoratra iray na koa fehezanteny iray isaky ny voambolana. Fehezanteny marim-pototra sy manana ny heviny, tsy manivaiva ny zon’olombelona sy ny fifanajana no nekena sy noraisina », hoy i Hanitr’Ony Salomon, filohan’ny Havatsa-Upem Sampana Frantsa.